rhaj0 - 17/05/2020 23:40
Efa lazaina foana hoe, aza miangonangona any intsony fa idiran-doza eo. Henoy ny Siansa. Mbola be di-doha miangona ihany.
Efa lazaina foana fa TsY miaro @ Coronavirus ny vavaka sy ny Baiboly. Mbola manao ary manantena mazia mirakla foana.
Izao ny vokany.
Dia io izao dia mbola lasa handeha hivavaka indray mba ho sitrana. Efa lazaina foana fa tsy ny vavaka no hahasitrana ny Coronavirus.
Dia asa ho'a fa dia izao angaha ny selection naturelle... Izay tsy mampiasa coco no ho fatifaty foana.
rhaj0 - 20/05/2020 04:19
RAha taloha tsy nipataloha izao ity ambany ity, dia hoe, lasan'i Dieu ilay Damopra.
Izao ampiasaina ny coco, ary dia fantatra hoe inona no mahavoa azy: satria mbola n(amp)iangonangona foana, nefa efa Coronavirus ny andro.
Dia izao izany izao najanona ny fotoana fanompom-pivavahana. Nefa angaha tsy izao indrindra no ilavana izany HONO ee...
Dia raha mbola tsy tonga saina @ izany ny Mpino hoe, tena tsisy ilavana azy izany miangonangona izany, tsy m(amp)itondra mankaiza, na akoriny aza, tena mampidi-doza, dia ... asa ho'a ee...
rhaj0 - 23/05/2020 16:30
Efa lazaina foana fa efa mba lehilahilehibe @ izay izao,
ary TSISy izany pensEe mazika izany, ka hoe,
mikimpy mafy toa constipE fotsiny io,
dia lasa voan'ny tsiankihetsika h@ coronavirus
rhaj0 - 24/05/2020 17:18
Samy mieritreritra ny hoe, ahoana ny hiverenana @ fiainana toa ny talohan'ny Coronavirus. Na ho ela na ho haingana tsy maintsy miasa/mivory/miala voly/miangona.. Ny fanaovana maska sy izay fitandremana eo ihany,fa ny olana dia rahefa miaraka ao amina efitra na kely na lehibe, ka miara-mihiboka ao elaela, dia mitombo ny riska ifampitampitan'ny virus (raha mbola misy).
Ka na fiangonana io izany na fialamboly (arts&sports) na bizina, dia mila misaina lalina iatrehana an'izany.
- Ny bizina izao mieritreritra hoe, ahoana indray ny planina fa toa tsy mety ny modely/kifombafomba teo aloha, ka dia tena mila mahay mamorona mivoatra manaraka ny coronavirus. Ohatra hoe, ilay bizina manao strip tease ireny, dia ny tarehy manao maska eo ambony makiyazy, fa miboridana ihany hono izany ee..
- ny fiangonana indray, asa raha tonga saina hoe toa tsy mety ny modely/kifombafomba teo aloha, ka dia tena mila mahay mamorona mivoatra manaraka ny coronavirus.
Ka rigide be no toetran'ny finoana/fivavahana, ary ny reference dia revirevy t@ l'an zero tao moyen-orient. Ka dia mipetraka ny fanontaniana..
- inona izany no tsisy ilavana azy ary mila ariana faty any @ ireo kifombafomba kristiana
- inona no tazomina na dia misy riska hahafatifaty foana @ coronavirus azany?
rhaj0 - 01/06/2020 12:16
Ka dia inona izany ny lesona azo tsoahina @ ity krizy Coronavirus ity.
1- mila mihaino dia manaraka ny Siansa.
Io aloha dia TSISY mazia mirakla eo, fa rahefa milaza izay lazainy ny Siansa @ io fotoana io, dia izay izany, Rahefa miova ny lazain'ny Siansa, satria nahazo fahalalana vaovao, dia arahina foana koa. Io ilay hoe, ny Siansa dia "work in progress", ary isika dia "matoky zaodahy mahay manefy"
Ohatra nisy fotoana hoe, TSY mila manao maska, fa aleo ho an'ny dokotera ny maska, fa isika dia mifampihatakataka sy tsy mikitikitika zavatra sy ny tena, ary mandio tanana. Nitombo anefa ny fahalalana, ary dia niova ny toro-marika, fa mila manao maska ihany izany, mba ampihena ny virus mety aparitaky ny tena... Na koa hoe, ilay virus dia mamely mafy ny selan'ny avokavoka. Ary taty aoriana, kay mamely koa ny selan'ny taova hafa, h@ ra.
2- mila zaraina ny fahalalana sy ny antontan'isa marina, atao mazava ary mangarahara, ary ny profesionely tompon'ny fahalalana no mizara ny fahalalana. Ny tompon'andraikitra politika dia manaraka ny toro-marika Siansa/Fahasalamana rahefa Siansa/Fahasalamana no resaka.
Nisy lahatsoratra nandalina fa ireo dictateur sady macho dia mihevitra ny tenany ho tompon'ny teny, ary mihevitra fa izy no mahalala ny tokony ho an'ny vahoaka. Ary dia ny propagandy ataony dia TSY mifototra @ fizarana mangarahara sy marin. Fa dia vasoka be izy ireo, saingy ny loza dia ny vokany, fa lasa maro kokoa ny maty sy marary: Russie an'i Putin, Bresil an'i Bolsonaro ary Trump sy USA.
3- mila miova sy mivoatra hatrany ny fiainana manaraka ny fiovana sy fivoatran'ny zava-misy, izany hoe mila miova sy mivoatra toa izany koa ny fatao sy ny fisainana.
Ohatra ny bizinesy modely maro izao mila miova. Ny restau, ny dentiste, ... mila miova ny fombafomba sy izay fatao, ary ho lafolafo kokoa izany ny maso-karena sy izay rehetra vola sy fampitaovana ao
Ary ny finoana/fivavahana koa dia MILA mianatra sy mampihatra ireo lesona ireo
rhaj0 - 30/06/2020 03:09
Ka mahazo miangona ihany hono izao, fa kosa, tsy mahazo (na hoe ampirisihina tsy) mihira na mitsoka mozika ao am-piangonana.
hi hi hi... dia ahoana izany. Baikon'ny Siansa TSY hidera ny Vadin'i Zanahary izany ny Kristiana
The government said congregational singing or chanting should be suspended, leaving singing duties to a cantor or soloist positioned at least four metres away from worshippers. Wind instruments are also discouraged under the same guidelines
rhaj0 - 08/07/2020 16:54
IZao izany ny (tsy) tokony atao @ izao fiainam-baovao miaraka @ COVID-19 izao
Dia mampihomehy ihany fa mitovy trousse @ mpandeha Bar ny mpandeha Fiangonana